Windows ayaa sameeyay dadaal xiddig ay Windows Phone App Store ka dhigi doonaa sida firfircoon sida kuwa Apple Store iyo Google Play Store. Tirada barnaamijyadooda Phone Windows lagu ballaariyo ee ku salysan bishiiba. Dadka isticmaala Windows hadda ka heli kartaa codsiyada rasmiga ah (barnaamijyadooda) iyo barnaamijyadooda kale ee Windows Phone in sida caadiga ah waxaa laga heli karaa suuqyada kale. Iyadoo Windows Phone App Store, user ah inuu karo inuu soo app la doonayo. a isku day hore. Haddii aysan u shaqeeyo sida aad u rajaynaynaa in aanu noqon, mid si fudud uninstall karo.
Hoos waxaa ku qoran, liiska ugu sareeya barnaamijyadooda Phone Windows ayaa lagu soo koobay ilaa. Liiska Koobay barnaamijyadooda kala duwan ee Windows Phone. kuwaas oo si xoogan loo isticmaalo meelaha shabakad bulsho, madadaalo, barnaamijyadooda fariimaha., music iyo barnaamijyadooda kale ee ku haboonaa karaa qaab nololeed users '.
1. VLC for Windows Phone (Free) - 3.5 / 5 stars
Sida cajiib ah sida version desktop-ka, VLC waa ciyaaryahan warbaahinta in ay bixisaa user la fudud ah si ay u isticmaalaan ciyaaryahanka multimedia in kasta oo warbaahinta kala duwan ee kala duwan ee qaabab iyo ilo ciyaari karo.
2. Adobe Photoshop Express (Free) - 4/5 stars
A qalab tafatirka sawir cajiib ah, oo ku haboon kasta user loo dhan yahay kuwa aan aqoon u Suite Adobe Photoshop. App ayaa isticmaala qalab si sixiddiisa sawirada sida qoqobada, lana siii iyo xil isha casaan bixisaa. Oo ay weheliso sida diirada ku darto saamaynta, waxa ay sidoo kale bixisaa dalabyo dheeraad ah oo ku-app iibsadaan.
3. Spotify - 4.5 / 5 stars
Ha illoobin isku dayaya in la helo xiriir ah in ay heeso kasta oo aad rabto in aad dhagaysan! Spotify waa dhan-in-mid xal u ah baahida music aad! Search, il oo kala soo bixi jecel raadkaagu iyo abuuro playlists. La wadaag waxa aad dhawaan u dhegaystay oo aad saaxiibo iyo nidaamka aad playlist in qalabka kasta!
4. Phototastic collage - 4.5 / 5 stars
Xalka dhammaan baahidaada collaging! App Tani waxay bixisaa in ka badan 100 arrimo u isticmaala in ay ka soo xusho oo dar taabtana ku dhameysteen iyagoo qoraalka iyo stickers.
5. Netflix - 4.1 / 5 stars
Your phone hadda waa shineemo mobile la Netflix! Iyadoo rukun si app this, mid isticmaali kartaa iyada oo uruuriyaa ee taxanaha TV iyo filimada, aragtida iyo iyaga kala soo bixi gal qalabka ay. Waxaa sidoo kale jira waqti tijaabo ah oo hal bil kuwa doonayay in la siiyo oo isku day ah oo hore.
6. Whatsapp - 4/5 stars
Whatsapp yahay waa in ay leeyihiin app fariin mobile qof walba. App. waxay bixisaa users la sahlo ee syncing xiriir toos ah ay mobile. Users moobilaakaaga ugu diri kartaa, sawirada share, videos, iyo fariimaha codka gaaban in xiriir ay sidoo kale la abuuro kooxo iyo yeedhi badan isticmaala si ay ugu biiraan wada hadal. App Tani. sidoo kale waa lacag la'aan ah ka xayaysiisyada, taas oo ah kuwa ugu caansan ee ay category.
7. Instagram - 4/5 stars
Instagram hadda waa on Windows Phone! App Tani. ogolaan in dadka isticmaala si ay u wadaagaan sawirada iyo videos la raacsan ay si toos ah ama si raacaynay ee la doortay. Instagram waxay bixisaa sida diirada kala duwan oo uu ka soo xusho in lagu dabaqo sawiro iyo filimo ka users '.
8. LinkedIn - 4.5 / 5 stars
Iska aad xirka xirfad soocaa la LinkedIn. Waxad abuuri kartaa profile xirfadle in waxay muraayad aad resume, xirmaan dadka kale ee warshadaha iyo sii casriyeeyaa booska ugu danbeeyay ee ka dhacay magaalada.
9. Facebook - 2.3 / 5 stars
The Facebook app abid loo jecel yahay. ogolaanayaa inaad joogto ah ula soo xiriirto qoyskaaga, saaxiibadaa, asxaabtaada iyo kuway isbarteen. User A awoodi doonaan in ay wadaagaan updates xaaladda, sawiro, video iyo qaar badan. Facebook ayaa qaababka kale in xidhi kara dadka isticmaala ay ka badan sidii hore. Waxaa la dhisay waxa ay kulan iyo codsiyada kale ayaa la socotid qaab nololeedka dadka isticmaala maskaxda.
10. Accuweather - 4/5 stars
Accuweather siiya user ilaa taariikhda macluumaadka cimilada oo kaa caawin kara dadka isticmaala si ay u qorsheeyaan oo ay maalin ka hor. Its function MinuteCast ayaa la saadaalinayaa by daqiiqadii oo la dareemi karin in aad meel guriga.
11. Microsoft Hyperlapse - 4.5 / 5 stars
Guusha A ee ay category, Microsoft Hyperlapse waa app doorbido in la abuuro videos waqti darajo. Koobidda waayo-aragnimo ah Weligeed ma sidaas u fudud. Users yihiin qabashada awood ama geliyaan videos ay u gal app iyo wixii ka dambeeyey dhigay xawaare in videos iyo abuuraan waqti-darajo videos deggan oo siman.
Madaxweyne Siilaanyo Oo SmartGlass 12. - 4/5 stars
SmartGlass Madaxweyne Siilaanyo, (waayo Madaxweyne Siilaanyo Oo 360, Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah) u beddesho karaa qalab mobile galay shaashadda labaad oo ay gacanta ku fog. Iyada oo shaqo kuwaas, user a awood u yeelan doonaan in ay maraan ku dhawaad ​​ay Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 ama Madaxweyne Siilaanyo Oo mid la xidhiidha xakamaynta screen ay qalab mobile ee u saamixi doontaa in ay ku isticmaalaan browser web oo ku jira, la xusho videos iyo music iyo sidoo kale adakaanayso content dheeraad ah oo ka kulan la doortay .
13. shidin (Free) -3
An akhristaha e-kitaabka iyo suuqa ah. App Tani waa xulasho wanaagsan oo kuwa doonaya in ay leeyihiin waayo-aragnimo reading wanaagsan. Saarney buug ay kuu Daadiyey doonaa buugaag classic lacag la'aan ah iyo suugaanta. Waxa kale oo aad ka heli kartaa ilaa taariikhda la sii daayo buugga ugu dambeeyey iyo iibsadaan sida uu ku farxi lahaa akhriska.
14. Evernote (Free) - 4/5 stars
Ilaalinta qoraalada aad la sameeyo si fudud la Evernote. Users ay awoodaan si ay u abuuraan buugaagta daruur ku salaysan in la meel kasta oo leh qalab kasta oo heli karaa! Users soo diri kartaa oo aad hesho farriimo aan xad lahayn kharash dheeraad ahna lahayn oo dhan.
_ 15. POF - Free Online shukaansiga - 4.1 / 5 stars
App A shukaansi in dadka isticmaala ku dayn doonaa, faa'iideysan ay isku geynta u dhigma heerka sare si aad u hesho kulan ee ugu wanaagsan lacag la'aan ah.
16. Twitter - 3.4 / 5 stars
Tweet fekerkaaga iyo sawiro raaca iyo dadka kale ee Tweet la app qeybsadaan. Ayaa Twitter u Windows leeyahay hawlaha badankooda in app waxay bixisaa; waxay u ogolaataa dadka inay Xidhiidh la yeelo dadka kale, wax cusub oo isu muujiyaan.
17. OneDrive - 4/5 stars
Kaydinta Daruur ha users haystaan ​​waraaqaha, sawiro, videos iyo faylasha kale online. App ayaa la synced karaa in qalabka kala duwan iyo dukumentiyo qaybsado asxaabteena waa fudud.
18. Arbacada ah - 3.1 / 5 stars
Samee dalab kasta oo alaabta mar walba. Arbacada ah waxay bixisaa haboon shopping online-ada aad ogolaanaysaa xitaa iyada oo ay wax soo saarka la fududahay in la isticmaalo hawlaha shaandhaynta halkaas oo mid ka mid ka raadin kartaa wax soo saarka by category ama kaliya ku qor in.
19. Facebook Rasuulka -3 / 5 stars
Rasuul in ay ku xiran tahay codsiga ugu weyn ee sida Facebook, app tani waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala in ay wacaan telefoonka, la abuuro CHAT group oo la socotid emoticons kala duwan iyo GIF.
20. Flipboard (Free) - 4 xiddigood / 5 stars
Flipboard koriyo news sida ay mawduucyo aad dooratay. Users waxaa ka arki kartaa sida ay magazine shakhsi ahaaneed; waxay kuu ogolaanaysaa inaad xitaa articles, videos iyo sawiro laga helay ilo kala duwan sida magazine DADKA ama NY Times.
> Resource > Windows > 20 Best Windows Phone Apps 2015